ခလုတ်ပိတ်ထားသော်လည်း ပလပ်ဖြုတ်မထားလျှင် လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို ဆွဲယူသုံးစွဲနေပြီးမီတာတက်နေသောပစ္စည်းမျာ – Youth Bar
ခလုတ်ပိတ်ထားသော်လည်း ပလပ်ဖြုတ်မထားလျှင် လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို ဆွဲယူသုံးစွဲနေပြီးမီတာတက်နေသောပစ္စည်းမျာ
ခလုတ်ပိတ်ထားသော်လည်း ပလပ်ဖြုတ်မထားလျှင် လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို ဆွဲယူသုံးစွဲနေပြီးမီတာတက်နေသောပစ္စည်းများ
ပြည်သူတွေကလည်း လျှပ်စစ်မီးကိုလျော့သုံးဖို့ ကြိုးစားနေကြမှာပါ။
ဒါကြောင့် မသုံးစွဲပဲ ပိတ်ထားပေမယ့်လည်းလျှပ်စစ်အားကို စွဲယူသုံးနေတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ အကြောင်းကို ပြောပြခြင်ပါတယ်။
၁။ ဖုန်း Charger
လူတွေတော်တော်များများက ဖုန်းအားသွင်းတဲ့ ခလုတ် (Charger) ကို ဖုန်းနဲ့ မသွင်းထားရင်တောင် ပလပ်ပေါက်နဲ့ ဒီအတိုင်း တပ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
အဲ့လိုထားရင် ဖုန်းအားမသွင်းပဲနဲ့တောင် တစ်နေ့လုံးကို 1.2 W လောက် ကုန်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဖုန်းအားသွင်းပြီးရင် charger ပါ ဖြုတ်ထားပါ။
၂။ TV Tuner
တီဗီရဲ့ Channel လိုင်းလေးတွေကို ရှာပေးတဲ့ Digital TV Tuner လေးတွေကို တီဗီပဲ ပိတ်ပြီး Tunerကို မပိတ်ပဲ ထားမိရင် တစ်နေ့ကို 22W ကုန်နေပါလိမ့်မယ်။ တော်တော်များများက တီဗီပိတ်ရုံနဲ့ပဲ လုံလောက်ပြီလို့ ထင်နေကြတတ်ပါတယ်။
၃။ တီဗီ (TV)
တီဗီကို ခလုတ်လုံး၀ ပိတ်လိုက်တာမဟုတ်ပဲ Standby Modeပဲ ထားရင်လည်း တစ်နေ့ကို လျှပ်စစ်မီး 24 Wလောက် ကုန်နေပါလိမ့်မယ်။
ကွန်ပျုတာတို့ Laptop တို့ကို ပိတ်ရုံဘဲပိတ်ပြီး ပလပ်တွေ မဖြုတ်ထားပါက တစ်နေ့ကို 96 W လောက်ကုန်နေပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ Standby Mode တို့ Sleep Mode တို့ထားပြီး ပလပ်ကိုမဖြုတ်ထားရင် ဒီထက် ၁ဆ ခွဲလောက်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။
၅။ Timer ပါတဲ့ အိမ်သုံးစက်ပစ္စည်း
Timerပါတဲ့ အိမ်သုံး စက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ Oven တို့ကို ပလပ်ကြိုးမဖြုတ်ထားပါက တစ်နေ့ကို 108 W လောက်ကုန် နေပါလိမ့်မယ်။ တတ်နိုင်ရင် ကိုယ်မသုံးသေးဘူးဆိုရင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ ပလပ်ကြိုးတွေကို ဖြုတ်ထားပါ။
ခလုတ်ပိတ်ထားရင်တောင်မှ သူတို့က လျှပ်စစ်ပါဝါကို ဆွဲနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိတဲ့အချိန် ဝါယာရှော့တွေ မဖြစ်အောင်လည်း ပလပ်ကြိုးတွေကို ဆွဲဖြုတ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
သူ့အလိုလို အလဟဿသ ဖြစ်နေတဲ့ လျှပ်စစ်မီးတွေက တစ်ခုချင်းစီဆိုရင် နည်းတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်း
အများကြီးကို ရက်ပေါင်းများစွာ၊ လပေါင်းများစွာ စုလိုက်ရင် အနည်းဆုံး ကိုယ့်ပိုက်ဆံ သောင်းဂဏန်း သိန်းဂဏန်း လောက်က အလဟဿ. ဖြစ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ျပည္သူေတြကလည္း လွ်ပ္စစ္မီးကိုေလ်ာ့သုံးဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကမွာပါ။
ဒါေၾကာင့္ မသုံးစြဲပဲ ပိတ္ထားေပမယ့္လည္းလွ်ပ္စစ္အားကို စြဲယူသုံးေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား အေၾကာင္းကို ေျပာျပျခင္ပါတယ္။
၁။ ဖုန္း Charger
လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဖုန္းအားသြင္းတဲ့ ခလုတ္ (Charger) ကို ဖုန္းနဲ႕ မသြင္းထားရင္ေတာင္ ပလပ္ေပါက္နဲ႕ ဒီအတိုင္း တပ္ထားေလ့ရွိပါတယ္။
အဲ့လိုထားရင္ ဖုန္းအားမသြင္းပဲနဲ႕ေတာင္ တစ္ေန႕လုံးကို 1.2 W ေလာက္ ကုန္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖုန္းအားသြင္းၿပီးရင္ charger ပါ ျဖဳတ္ထားပါ။
တီဗီရဲ႕ Channel လိုင္းေလးေတြကို ရွာေပးတဲ့ Digital TV Tuner ေလးေတြကို တီဗီပဲ ပိတ္ၿပီး Tunerကို မပိတ္ပဲ ထားမိရင္ တစ္ေန႕ကို 22W ကုန္ေနပါလိမ့္မယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တီဗီပိတ္႐ုံနဲ႕ပဲ လုံေလာက္ၿပီလို႔ ထင္ေနၾကတတ္ပါတယ္။
တီဗီကို ခလုတ္လုံး၀ ပိတ္လိုက္တာမဟုတ္ပဲ Standby Modeပဲ ထားရင္လည္း တစ္ေန႕ကို လွ်ပ္စစ္မီး 24 Wေလာက္ ကုန္ေနပါလိမ့္မယ္။
ကြန္ပ်ဳတာတို႔ Laptop တို႔ကို ပိတ္႐ုံဘဲပိတ္ၿပီး ပလပ္ေတြ မျဖဳတ္ထားပါက တစ္ေန႕ကို 96 W ေလာက္ကုန္ေနပါလိမ့္မယ္။
အကယ္၍ Standby Mode တို႔ Sleep Mode တို႔ထားၿပီး ပလပ္ကိုမျဖဳတ္ထားရင္ ဒီထက္ ၁ဆ ခြဲေလာက္ကုန္ပါလိမ့္မယ္။
၅။ Timer ပါတဲ့ အိမ္သုံးစက္ပစၥည္း
Timerပါတဲ့ အိမ္သုံး စက္ပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ Oven တို႔ကို ပလပ္ႀကိဳးမျဖဳတ္ထားပါက တစ္ေန႕ကို 108 W ေလာက္ကုန္ ေနပါလိမ့္မယ္။ တတ္နိုင္ရင္ ကိုယ္မသုံးေသးဘူးဆိုရင္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြရဲ႕ ပလပ္ႀကိဳးေတြကို ျဖဳတ္ထားပါ။
ခလုတ္ပိတ္ထားရင္ေတာင္မွ သူတို႔က လွ်ပ္စစ္ပါဝါကို ဆြဲေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိတဲ့အခ်ိန္ ဝါယာေရွာ့ေတြ မျဖစ္ေအာင္လည္း ပလပ္ႀကိဳးေတြကို ဆြဲျဖဳတ္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။
သူ႕အလိုလို အလဟႆသ ျဖစ္ေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးေတြက တစ္ခုခ်င္းစီဆိုရင္ နည္းတယ္လို႔ ထင္ရေပမယ့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း
အမ်ားႀကီးကို ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ လေပါင္းမ်ားစြာ စုလိုက္ရင္ အနည္းဆုံး ကိုယ့္ပိုက္ဆံ ေသာင္းဂဏန္း သိန္းဂဏန္း ေလာက္က အလဟႆ. ျဖစ္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အိမ်ရှင်မတွေ သတိထားသင်တဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ငွေဆုမဲ/ဆုကြေး
မီးပူဖင်မှာတတ်နေတဲ့ဂျိုး ပါရာစီတမောလေးနှစ်ပြားနဲ့ ဖြေရှင်းလို့ရတယ်နော်